UCHRISTINA HENDRICKS BUDDY WEEMCULO EZIMCULO MALUNGA NEE-80S ZEBHENDI YAMANTOMBAZANA - UCHRISTINA HENDRICKS
Disney Isiteshi Sokuqala Iimuvi
UChristina Hendricks usete inkwenkwezi (kwaye ucule!) Kwi-Movie Buddy yabasetyhini malunga ne-80s Girl Band
Bendingazi ukuba ndifuna, hayi, iyafuneka uChristina Hendricks oculayo ebomini bam, kodwa ke ngumlingo weemovie, bantu. Konke malunga nokulindela ibango.
Ngoku ka Isikrini imihla ngemihla , Indoda ephambene I-Hendricks iqhotyoshelwe kwinkwenkwezi Izaqhwithi , umhlobo ohlekisayo malunga neenkwenkwezi ezazisokola ngaphambili ezazizama ukubuyisa iqela lakhe. Nantsi inkcazo yeScreenDaily:
Iskripthi silandela uKim Ayers, owayeneminyaka engamashumi amabini eyadlulayo wayelilungu eligqibeleleyo leqela lamantombazana angama-80s, iIqhwithi. Namhlanje, usebenza njengomonwabisi wabantwana kwaye uyasokola ukukhulisa intombi yakhe yedwa. Kodwa izinto zibonakala ngathi ziza kutshintsha xa i-iconic yeTurricanes tune isampulu ngumqokeleli ophezulu uMC Freak kwaye uphuma ngqo kwinombolo yokuqala.
UKim ulandelela iFreak kodwa kungekudala ufumanisa ukuba ikhontrakthi yedodgy ibonisa ukuba akanatyala lakhe. Nangona kunjalo, ebethwe ngumoya wakhe wokulwa, umnika umgca wokuphila. Uya kumvumela ukuba enze naye, kodwa kukho ukubamba. Ufuna zontathu ezi 'Nkanyamba'.
Ke uKim kufuneka afumane abantu abatshatileyo abatshatileyo uNicky Bliss, okokugqibela ukubonwa kwi-rehab kunye ne-Alex Moon, ngoku imbongi yabasetyhini enomsindo, kwaye ababacenge ukuba bavuse ibhendi yabo yetshathi.
Ukunyaniseka ukuba inkcazo ayenzi nto kum (kwaye eneneni iyavakala inengxaki), kodwa ithathela ingqalelo Izaqhwithi izakunika u-Hendricks kunye nabalingane bakhe ababhinqileyo ithuba lokubonisa umculo wabo kunye ne-chops chops, ndisonwabile. Iskripthi saye saxakaniseka kakhulu malunga noMnyhadala weFilimu waseToronto, ke iminwe-yawela ukuba ukwenziwa kuya kuba yinto eyoyikisayo njengombono.
Izaqhwithi iya kubhalwa nguJonathan Lynn ( Umzala wam uVinny , Inkcazelo ), Ke ukuba akukho nto iyenye, nayiphi na kunye nazo zonke ii-80s ze-flashback scenes kufuneka ndihlangule .
Ikristale Emnyama Yobudala Yokuxhathisa
iklabhu ayikaze ibe kwindalo yonke ye-entropia
eyokugqibela kuthi ikhava yomdlalo
Yakha owakho umdlalo wepaki yedayinaso
Izitalato zempembelelo enobuhlanga kunyulo losodolophu
Imbali ye-ussr tetris